Maalinta: Oktoobar 2, 2017
Sawirada UOP Sawirada
Ay qabatay Jamhuuriyadda Turkiga iyo Midowga Yurub, Gaadiidka Barnaamijka Hawleed (UOP), Istanbul Haydarpasa iyo Sirkeci Station la Zonguldak, Karabük, mid ka mid ah shan bandhiga sawirka qabtay Samsun, kumanaan dad ah ayaa la soo bandhigay. Muwaadiniin badan [More ...]
Mashruucyada dhismaha ee Mashruucyada Labada Giant waxaa la aqoonsaday
Qandaraaska dhismaha garoonka diyaaradaha iyo mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan taariikhda Karaman iyo mashaariicda Xarunta Saadka, oo aad muhiim ugu ah koritaanka iyo horumarka warshadaha Karaman iyo dhaqaalaha, ayaa la rumeeystay. Bulsho iyo bulsho [More ...]
kibirka Eskişehir, mustaqbalka Turkiga
Waxaa la aasaasay 1958, Jaamacadda Anadolu waxay ku guuleysatay 'shaqo dheeri ah waqti yar'. AU waxay la tartamaysaa tartamayaasheeda qaranka iyo kuwa caalamiga ah waxayna la kulantay da'deeda dahabiga ah xagga cilmi baarista, waxqabadka tacliinta iyo daabacaadda. Rector [More ...]
Ardayda ku sugan Konya ayaa ka faa'iideysanaya Gaadiidka leh 3 Days Free
Ardayda dhowaan ka diiwaangashan jaamacadaha ee Konya waxay ka faa'iideystaan ​​basaska 3 iyo taraamyada Dowladaha Hoose ee Magaalada Konya ee lacag la’aan ah maalin. Laga soo bilaabo xafiiska Elkart ee Dawlada Hoose iyo istaagga elkart oo laga aasaasay Fagaaraha Guusha [More ...]
Haydarpaşa Solidarity, Heldarpaşa Gary Önündeydi waxaa lagu qabtay 300.Haftinda.
12 waa ficillada 300 ee Axadda oo la bilaabay dhammaadka adeegga tababbarka guud ee Haydarpasa Solidarity, kaas oo la dagaallamayey isbeddelka Haydarpaşa Garda uu doonayey inuu qaato sanado. Maanta 01.10.2017 oo ku taal Xarunta tareenka ee Haydarpaşa 13.00 illaa 14.00 [More ...]
Ku tababaro Iskuulada Pristina iyo Ipek
Adeegyada tareenada ayaa dib u bilaabay inta udhaxeysa Pristina iyo magaalada Silk ee galbeedka Kosovo. Gawaarida cusub ee 9 ayaa lagu daray duullimaadyada. Wasiirka Horumarinta Dhaqaalaha ee Kosovo Valdrin Lluka [More ...]
Cetin Altun oo loo magacaabay Kaaliyaha Guud ee TCDD Taşımacılık A.Ş.
Çetin Altun, oo loo magacaabay Kaaliyaha Maareeyaha Guud ee TCDD Transportation Inc., wuxuu shaqadiisa ku bilaabay 29 Sebtember 2017. 27 Janaayo 1970 wuxuu ku dhashay Yildizeli, Altun wuxuu ku dhammeystay waxbarashadiisa dugsiga hoose, dugsiga sare iyo dugsiga sare ee Sivas iyo [More ...]
Tumar leh CHP: "Adana waa Gaadiid Tareen sida
Dadka Jamhuuriga ee xisbiga (CHP) Adana xigeenka, Grand National Assembly ee Turkey (Baarlamaanka) State leedahay Enterprises (Søes) Guddoomiyaha Zulfikar İnönü All of bari Adana iyo galbeed xiri doona line rakaabka tareenka [More ...]
Iskaashiga Samsun-Sarp Tareenka
Madaxdii goleyaasha magaalada Badda Madoow ayaa isugu soo baxay Rize waxayna go’aansadeen inay talaabo ka qaadaan Samsun-Sarp Railway. Madaxweynaha Golaha Militariga Magaalada, Ozgur Enginyurt, oo ah kulanka lagu dhisayo Golaha Golaha Magaalada Black Sea ayaa ku dhawaaqay go'aanka. Samsun-SARP [More ...]
Dhibaatada Gaadiidka ee Samsun Goobta sugeysa xal
Rakaabka bixiya gaadiid ka soo qaadaya badhtamaha Samsun oo tagaya degmooyinka ma heli karaan dolmuş markay soo noqon doonaan fiidkii. Rakaabka ka cabanaya guuldaradan ayaa xal ka sugaya maamulada. Laga soo bilaabo xarunta Samsun Arbacada, Terme, Salpazari, 19 May [More ...]
Xaruntu waxay ka heshay Tansaaniya hal bilyan oo doollar oo doolar ah
Yapı Merkezi, oo kaalinta 78 ka gashay liiska qandaraasleyda ugu weyn adduunka, ayaa ka heshay Tansaaniya qandaraas ballaaran. Bishii Febraayo, 1.2, oo ay weheliyaan la-hawlgalahooda Boortaqiiska, waxay la wareegeen mashruuca tareenka xawaaraha xawaaraha ku kaca ee $ billion bilyan [More ...]
CHP Ku-xigeenka Kule :: 2023 Tartanka Tareenka Q
Tufan Köse, Kuxigeenka Xisbiga Jamhuuriga (Çorum) iyo Golaha Qaranka ee Golaha Sare ee Turkiga (TBMM), ayaa caddeeyay in garoonka Melleteriga ee Merzifon uusan ka faa'iideysan doonin afterorum kadib guuritaanka Saldhigga Akıncı. [More ...]
RayHaber 02.10.2017 Warbixinta Shirka
Ma jiro diiwaan gundhig u ah 02.10.2017 nidaamkayaga.
Haci Bayram Baskayar Stop Complex Modern in Progress
Marka la eego baaxadda mashruuca Cusboonaysiinta Dayactirka Magaalada Tarihi Ulus ee Tarihi Ulus, kaas oo muujinaya aqoonsiga taariikhiga ah ee Ulus, Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay bilawday xarun bas casri ah oo casri ah oo leh awooda gawaarida 650. [More ...]